पद 1: यो मेरो मन मा केहि तपाईं एक क्षण पायो के? Soapbox स्वाग, म सिर्फ यो मा पायो म यी चेन मा भएको र म यो थाकेको छु (कार हल्ला) I know...
परिचय: (नेटली) म हेर्दै हेर्न तपाईं के हेर्न चाहनुहुन्छ के? म एकल छु? खैर, sorta थोडे शायद के तपाईं मनमा छ गर्नुभयो? Your face looks familiar I see you all...
पद 1: Boy I hopped out the grave good morning I been sleeping for too long I’m yawning Everybody talking trying to see me, उहाँले सास कसरी जस्तै अविश्वास? He was six feet...
परिचय / नमूना: पर्ख, पर्ख मलाई अर्को एक प्राप्त गरौं (4x दोहोर्याउनुहोस्) पद: केटा तपाईंलाई थाहा म तिनीहरूलाई पायो जे गरेको, मेरो खुट्टा को craze मा पकडे तिनीहरूलाई रक, my closet ain’t...
पद 1: I’m going in today This my only shot My life could end today Yeah my heart stop If I go out tonight I’m going out on top I give it all...
परिचय: ओह, म तिमीलाई माया गर्छु, हाँ जस्तै कुनै अन्य, हाँ म देख्दा तपाईं बस गर्मी जस्तै चमक मुस्कान, हाँ पद 1: You know that feeling when them words fail It’s...